I-Absolute waterfront (ayikho imali yokuhlanza) - I-Airbnb
I-Absolute waterfront (ayikho imali yokuhlanza)
Cairns City, Queensland, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mandy
U-Mandy Ungumbungazi ovelele
ICairns Harbour Lights iyihhotela elihle elisendaweni ephakathi nendawo elise-Cairns Marina elinikezela ngendawo yokuhlala engasemanzini ekahle.Sinikezela ngendlu enefenisha ephelele, ebekwe kahle igumbi elilodwa lokulala.
Isitezi esingaphansi kwesakhiwo yiReef Fleet Terminal, izindawo zokudlela ezingasemanzini kanye nezitolo zekhofi. Ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya esitolo esikhulu, amakhasino, izindawo zokucima ukoma, izindawo ezidayisa utshwala, namakilabhu.
I-Absolute waterfront enokubukwa okumangalisayo. ITheminali ye-Reef Fleet itholakala phansi endaweni eyinkimbinkimbi.Indawo yokuhlala engcono kakhulu neseduze yezivakashi ezisuka lapho zintweza, zidoba noma zihambe ngomkhumbi zisuka e-Cairns Marina
4.92 · 277 okushiwo abanye
Indawo yangakini ihlanganisa inqwaba yezindawo zokudlela ezisezingeni eliphezulu esitezi esiphansi sefulethi, i-Rusty's Markets, i-Casino ngaphesheya komgwaqo, izitolo ezinkulu eziseduze, kanye nokuthenga kwekhwalithi enkabeni yedolobha.
Siyatholakala ukuze siphendule imilayezo yombhalo kanye/noma izingcingo
Hlola ezinye izinketho ezise- Cairns City namaphethelo